Somaliland: Xildhibaan Ka Tirsan Guurtida Somaliland Oo Ku Baaqay In Dalka Lagu Xukumo Shareecadda Islaamka - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xildhibaan Ka Tirsan Guurtida Somaliland Oo Ku Baaqay In Dalka Lagu...
Xildhibaan Maxamed Maxamuud Dheeg, oo ka mid ah mudanayaasha golaha Guurtida, ayaa golaha ugu baaqay in lagu dhawaaqo ku dhaqanka shareecadda islaamka in dalka lagu maamulo. Islamarkaanna wuxuu sheegay in maxkamaddaha laga qaado baynadhkoodhka iyo wixii shareecadda islaamka ka soo horjeeda.
Xildhibaan Dheeg sidoo kale wuxuu sheegay in la si waafajiyo qodobka shanaad iyo calanka tawxiidku ku qoran yahay, oo shacab iyo dawlad-ba lagu soo noqdo shareecadda islaamka.
Xildhibaanku wuxuu sidaa ka sheegay fadhigii golaha guurtida ee shalay qabsoomay xarunta golaha.
Xildhibaan Maxamed Maxamuud Dheeg oo arrimaha ka hadlay wuxuu yidhi “Si Alle noogu naxariisto oo ajandaheenaan ku jiray oo aynu aad isugu raacnay oo aynu is-nidhi ha lagu dhawaaqo ku dhaqanka shareecadda islaamka in dawlad iyo shacab lagu soo noqdo.”
Sidoo kale, wuxuu golaha ugu baaqay in lagu dhawaaqo ku dhaqanka shareecadda islaamka in lagu maamulo dalka “Waxaan leeyahay haynu ku dhawaaqno shareecadda islaamka dalka lagu dhaqo, qodobka 5-aad iyo calanka tawxiidku ku yaallo ha la is-waafajiyo, baynadhkoodhkanna ha laga qaado maxkamadaha iyo wixii shareecadda islaamka ka soo horjeeda, inta in lagu baaqo ayaan soo jeedinayaa.” Sidaa ayuu yidhi Xildhibaan Dheeg.
Xildhibaan Maxamed Maxamuud Dheeg